‘पा‘ईलटको ग‘ल्ति थियो त ? किन जागिर ग‘यो( भिडियो):: Mero Desh
‘पा‘ईलटको ग‘ल्ति थियो त ? किन जागिर ग‘यो( भिडियो)
Published on: १८ आश्विन २०७८, सोमबार ०२:०४
काठमाडौ आङगेलु शेर्पा बि,रुद्ध यस्तो सम्म खेल भएको रहेछ जसले ७७ जनाको ज्या,न बचा,ए उसैलाई का,रवाही [हेर्नुस भिडियो]अधिकास मानिसहरुले जिज्ञाशा राखे को विषय जो अहिले च‘र्चामा छ र सत्तहत्तर जना मानिस को”
“ज्यान बचाए को पाईलट लाई किन कारवा”हि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।ल्याण्डिङ गियर नखुलेपछि सं,कटमा परेको बुद्ध एयरको विमान सकुशल अवतरण गराउने क्याप्टेन आ,ङगेलु शेर्पाले तत्काल विमान उडाउन नपाउने भएका
छन् । गत सोमबार ८ः३० मा काठमाडौंबाट विराटनगरका लागि उडेको बु,द्ध एयरको नाइन–एनएनआईको एटिआर विमानको ल्या,ण्डिङ गियर नखुले पछि “विराटनगर मा”” अवतरण गर्न नसकी काठमाडौंमा अव,तरण गरेको थियो।
७३ जना यात्रु बोकेको सो विमान दुई घ,ण्टा आ,काशमा उड्नुपरेको थियो।तर, अन्तिममा ल्याण्डिङ गियर खुलेपछि काठमाडौंमा नर्मल अवतरण गरिँदा ठूलो दु,घर्,टना टरेको थियो । बिमा,,नका क्याप्टेन आङगेलु शेर्पाले आफ्नो पनि ज्यान जोखि,ममा राखेर एक पल पनि बिच,लित नभइ ७३
जना को ज्यान बचाए उनलाई सम्मान गर्नुको सट्टा उल्टो का,रवाही गर्ने भन्दै एक सगरमाथा आरोही बिजय घिमिरे यसरि आक्रो,शित भए । बाकी भिडियो मा हेरौ
यो पनि,,पञ्चा सिंह बनिन् अ,खिल क्रा,न्ति कारी को अध्यक्ष १७ असोज, काठमाडौं । मा ओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रा,न्तिकारीको अध्यक्ष पञ्चा सिंह बने की छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष मा पञ्चा सिंह हुने निर्णय सुनाएका हुन् ।
अखिल क्रा,न्ति,कारीको इतिहासमा महिला अध्यक्ष बनेको यो पहिलो पटक हो क्रान्तिकारी को अध्यक्षमा पञ्चा सिंह र सुरेन्द्र बस्नेत मुख्य दाबेदार थिए । अखिल क्रा,न्तिकारी ले अध्यक्ष चयनको जिम्मा पार्टी अध्यक्ष प्र,चण्डलाई दिए को थियो ।
नेतृत्व चयनको विषयमा छलफल गर्न अखिल क्रान्तिकारी का नेताहरु आज बिहान प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए ।सोही छलफल मा प्रचण्डले पञ्चालाई अध्यक्ष तोकि दिएका एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए।